ICMC Statement on Scam Calls Masquerading as the Organization and Its Officers - အဖဲွအစညး် င၎့် ငး်၏အရာိများအေနြဖင ့် လိမ်လည်လည့်ြဖားဖနး်ေခ ဆိမများအေပ ICMC ထတ် - The International Catholic Migration Commission (ICMC)
ICMC wishes to warn the public at large about this fraudulent activity being perpetrated using the name of the organisation, and/or its officers.
ICMC would like to reiterate the following
1) All ICMC assistance is free of charge.
2) ICMC Malaysia does not conduct any resettlement processing for the Canadian program or any other resettlement programs.
ICMC Malaysia strongly recommends that the recipients of solicitations, such as those described above exercise extreme caution in respect of such solicitations. Always make sure you receive your information from an official source like UNHCR and from ICMC and avoid any rumours/false news that may be spreading among the community. You can always get in touch with ICMC to verify this kind of information via malaysia@icmc.net or our hotlines (+60) 010-4211274 (Rohingya/Burmese), (+60) 016-204 0491 (Arabic/Somali) and (+60) 014-2400191 (Rohingya).
အဖဲွအစညး် င၎့် ငး်၏အရာိများအေနြဖင ့် လိမ်လည်လည့်ြဖားဖနး်ေခ ဆိမများအေပ ICMC ထတ်
သည် ဒကသည်အသိငး်အဝနး်အတွငး် စာသားမက်ေဆ့ချ် ငအ့် သံမက်ေဆ့ချ်များမတစ်ဆင့် ေလ ာက်ထားသသည် အခေ ကးေငွေပးေဆာင်ေနသေရွကေနဒါိင်ငံသိ ြပ့ န်လည်ေနရာချထားေရး လပ်ငနး်စ အတွက် ICMC Malaysia သည် အင်တာဗျ းများြပ လပ်ေနသည်ဟလိမ်လည်လည့်ြဖား မများကိမားယွငး်စာွေဖာ်ြပထားသည်ကိသတိြပ မိပါသည်။
ICMC သည် အဖဲွအစညး်၏အမည် င/့် သိမ့ ဟတ် ၎ငး်၏အရာိများကိ အသံးြပ ၍ ဤလိမ်လည် လည့်ြဖားသည့်လပ်ေဆာင်ချက် င ့် ပတ်သက်၍ အများြပည်သအားကျယ်ကျယ် ြပနြပ့်န်သ့ တိေပးလိပါသည်။
၁။ ICMC အကအညီအားလးံသည်အခမဲ့ြဖစ်သည်။
၂။ ICMC Malaysia သည် ကေနဒါအစီအစ သိမ့ ဟတ်အြခားေသာ ြပန်လည်ေနရာချထားေရး အစီအစ များအတွက် ြပန်လည်ေနရာချထားေရးလပ်ငနး်စ များကိလပ်ေဆာင်ြခငး်မိပါ။
သည် အထက်ေဖာ်ြပပါ ေတာငး်ဆိချက်များကဲ့သိေသာ့ ေတာငး်ဆိမများကိ လက်ခံရိသများသည် ထိသိေသာ့ ေတာငး်ဆိမများ ငစ် ့ပ်လျး၍အလွန်သတိထားလပ်ေဆာင်ရန် ြပငး်ြပငး်ထန်ထန် အကံြပ ထားသည်။သင်သည်သတငး်အချက် အလက်များကိ UNHCR င ICMC့် စာမျက်ာတိမ့ တရားဝင်သတငး်အချက်အလက်များအမဲလက်ခံရယပီး၊ လမအသိငး်အဝိငး်အတွငး် ပျံ ံသာွ့ းိင်သည့် ေကာလာဟလ/မဟတ်မမန်သတငး်များကိေ ာင်က ပါ။ ဤကဲ့သိေသာ့ အချက်အလက် များကိ malaysia@icmc.net သိမ့ ဟတ်က ်ပ် တိ၏့ hotlines များမ တဆင ့် အတည်ြပ ရန် ICMC င ့် အမဲဆက်သွယ်ိင်ပါသည်။
016-204 0491 (အာရဗီ/ဆိမာလီ) င 014-2400191 (့် ိဟင်ဂျာ)။
ICMC and other Catholic-inspired organizations have established the Catholic Response for Ukraine (CR4U) Working Group. The aim of the group is…